Nhengo dzeCCC Dzonzi neDare Hadzina Mhosva kuMasvingo Mushure Mekusungwa neMapurisa
Dare reMagistrate reMasvingo nemusi weChina rakarasa nyaya yanga ichipomerwa kanzura weward 4 webato reCitizens Coalition for Change pamwe nenhengo mbiri dzebato iri yekuita musangano wekutsvaga rutsigiro vasina kupuwa mvumo nemapurisa pasarudzo dzema by elections dzakaitwa mwedzi wapfuura.
Mutongi wedare VaFarai Gwitima, vachirasa nyaya iyi, vakati dare rakashaiwa humbowo hwekusungirira vaTabe, VaVingisayi Nerupandayi pamwe naAmai Magaret Chakabuda, avo vakasungwa muna Ndira vachipomerwa mhosva yekuita musangano wezvematongerwe enyika zvisiri pamutemo.
Gweta revatatu ava VaPhillip Shumba, vekwa Metendi, Mdisi and Shumbalegal Practitioners, vaudza Studuio 7 kuti dare raone nyaya iyi isina nematuro ose
VaTabe vakati vakatambira mutongo wedare nemufaro vachiti zvakabudisa pachena kuti mapurisa akavasunga ainge achiita zvisiri pamutemo.
VaTabe nevamwe vavo vakasungwa musi wa 17 Ndira apo vaiita musangano wekutsvaga rutsigiro musarudzo dzema kanzura muward 4 umo mavakozokunda pasarudzo dzakitwa musi wa 26Kurume.
Vachishandisa mutemo weMaintenance of Peace and Order, mapurisa munguva yesarudzo akasungawo nhengo dzeCCC dzinosanganisira VaElliot Mabeza kuBeitbridge, VaPaul Mudinhi, VaEdson Muzira naVaRegis Mhishi kuChegutu.
KuKadoma kwakasungwa VaNhamo Mazkaza naVaDennis Murombedzi nenyaya yekufamba vachitsvaga rutsigiro vachinzi vaiita ruzha rwusingabvumidzwe pasi pemutemo we Criminal Law (Codification and Reform) Act.